Sidee ku cadaadisaa MOV (Quicktime) faylasha Mac / Windows
Waxaan leeyahay file a 120MB .mov in aan doonayo in aan ku cadaadisaa in ka yar 25MB si aan u email u diri kartaa adiga oo isticmaalaya Gmail. Waxaan xaq-riixi oo la doortay "cadaadi," laakiin waxa kaliya u helay in ay hoos u 99MB sida file zip ah. Maldahan kasta si ay u xaliyaan aan dhibaato?
Waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale soo gaarto dhibaato kor ku xusan. A file MOV waaweyn sida caadiga ah qaadataa meel badan oo ka mid ah computer ama aaladaha la qaadi karo sida iPhone, iPod, PSP, iwm Waxaa xitaa na wuxu xakameeya in ay u diraan si ay saaxiibo ama wadaagaan internet-ka. Nasiib darro, WinRAR ama WinZip ma dhab ahaantii abuuro warbaahinta cusub ee cusub, qaab dheeraad ah ee isafgaradka, waxay u cadaadin. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay hawadda ah MOV weli xirfadeed si sahlan loo sayidkiisa sida Wondershare MOV Video Converter . Waxaa cadaadin karo MOV (QuickTime) files hilaac tayo khasaaraha-yar (riixo Dufcaddii taageeray).
Hawadda MOV Best for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Si fudud cadaadisaa MOV video aan khasaaro tayada wax.
Dheellitir goobaha video sida bitrate, xallinta heerka, jir iyo ka badan.
Beddelaan in kale qaabab video haddii aad u baahan tahay.
Xawaaraha diinta Fast marka la barbar dhigo kale converters video on suuqa.
1. Load MOV (QuickTime) faylasha in hawadda MOV this
Guji "Add Files" button inay ku shuban file caga aad ka miiska iyo fayl. Waxaad dajiyaan karaa in ka badan hal file, saxaafadda "Ctrl" marka la dooranayo videos MOV ah. Ama kaliya jiidi oo hoos u dhammaan faylasha MOV aad rabto in aad cadaadin galay barnaamijkan. Waxay ku tusi doonaa sida thumbnails, waxaad iyaga ku eegaan karaa shaashadda Falanqeynta midig.
2. Customize goobaha u MOV (QuickTime) video
Click icon qaab image u muujiyo liiska hoos-hoos qaabka. Dooro MOV sida qaab wax soo saarka, ka dibna riix "Settings" badhanka si isku dubaridi video &-beegyada uu audio sida baahidaada:
Encoder: Riix arrow si ay u doortaan soo daadiyaa fursadaha. ama kaliya ha sida defaulted. Resolution : Waxaa jira fursado badan. 240 * 160, 320 * 240.480 * 320.480 * 368.640 * 480, 1280 * 720 iwm Rate jir ah, dhig si aad u yarayso ama dadajiso xawaaraha ciyaareed. Guud ahaan, qiimaha sarreeya 20 faraq yar. Rate Inyar: Waxaad dooran kartaa ka 256 si 2000kbps sida baahidaada.
Talooyin: Haddii qaab wax soo saarka ma aha walaac, waxa kale oo aad u bedeli karaan MOV in MP4, M4V, ama FLV taasoo laga yaabo in la moodo file size yar. Si aad u samayn, guji image qaabka video shay kasta si ay u helaan wax soo saarka liiska format, ka dibna waxay doortaa qaab video la jecel yahay.
3. riixo Start MOV
Marka dhan goobaha ama baddalista qanacsan, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waxaa ka dhacay button badalo si loo kiciyo riixo MOV. Ka dib markii riixo oo dhammeystiran, riix batoonka Folder Open si loo hubiyo tayada wax soo saarka size iyo video ah. Haddii lagu qanco, aad si habsami leh u geliyey karaa qalabka la qaadi karo ama u soo dir saaxiibadaa la wadaago hadda. Shifo!
Video tutorial: Sida loo cadaadin MOV video files
Sida loo Edit MOV Videos in Windows iyo Mac
Sida loo Beddelaan MOV Video inay Lugood
Sida loo jar MOV Video Files
Sida loo qas Video Files
A Guide Buuxi in iMovie
Sida loo ka saar Video Audio
Sida loo ciyaaro QuickTime Video ku iPad / iPhone / Android
10 QuickTime Xoog Maqaallo aan aad ugu garataan
10 4k TV'yada, taas oo mid ka mid khayr idiin ah?
5 Great Video Raadka ee Adobe Ciyaar iyo sida loo isticmaalo
Sida loo dar Audio libdhi in Saamaynta
Webvideo Author: Beddelaan video in hoorto Flash video
> Resource > Video > Sidee ku cadaadisaa MOV (Quicktime) faylasha Mac / Windows